Hetraketraka politika tany Morondava : Namoy ny ainy ilay mpikatroka tao amin’ny k25 -
AccueilSongandinaHetraketraka politika tany Morondava : Namoy ny ainy ilay mpikatroka tao amin’ny k25
Mbola tsy misy fitsaharana ny sotasota atao amin’ny mpanaraka ny kandidà laharana faha-25. Mpikatroka iray antsoina hoe Said Allaoui indray mantsy no lasibatra vono feno habibiana, tany Morondava, ny 14 desambra lasa teo, ka namoy ny ainy, omaly vokatry ny ratra nahazo azy. Raha tsiahivina, dia isan’ireo mavitrika tamin’ny fampielezan-kevitra sy ny fanohanana an’i Marc Ravalomananana any an-toerana izy ity, izao niharan’ny vono izao. Norasarasaina tamin’ny alalan’ny zava-maranitra ity farany, ka naratra mafy vokatry ny fahavoazany, ka nitarika izaofahafatesana izao. Mbola tsy fantatra mazava kosa hatreto ireo nahavanona ny loza, fa izy efa naratra mafy no nisy nahita. Efa mandeha ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana taorian’ny fitoriana napetraky ny fianakaviana ankehitriny.
Raha ny zavatra tsikaritra, heverina fa misy ifandraisany amin’ny resaka politika ny anton’izao famonoana olona tahaka izao, raha ireo tranga efa hita. Tsy mitsahatra mampiseho hery sy habibiana amin’ireo mpomba an’i Marc Ravalomanana, na ny k25 ireo mpifaninana aminy, ka mampiseho ampahibemaso ny sotasota amin’ireo sahy mijoro ho mpomba azy. Marihina hatrany moa fa efa nisy sahala amin’ity ihany koa tany an-toerana, vao nanomboka kely ny fampielezan-kevitra. Filoha lefitry ny K25, komity manohana sy mampandany ny kandidà Marc Ravalomanana any an-toerana, ary efa kandidà depiote TIM tao Morondava no lasibatra tamin’izany. Raha iny hiditra ny vavahady misy ny trano fonenany ao Tsimahavaobe iny koa Rivojaona Raherimihaja sy ny vadiny, ny alin’ny alakamisy hifoha ity zoma 7 desambra no nisy telolahy nipoitra tampoka ary nidaroka azy tamin’ny « bois rond », ka nahavoa azy tamin’ny lohany. Ankoatra izay, efa nisy koa ireo roalahy mpikambana namoy ny ainy voatifitra, ny andron’ny fifidianana fihodinana faharoa lasa teo. Taorian’izay koa dia efa nisy ilay kolonely novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ihany. Hatreto, ireo rehetra nitondra faisana dia miala maina avokoa fa tsy manokatra ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana.